Day: Mee 2, 2020
Ihe dị ka puku ụgbọ mmiri iri abụọ gafere gafere okporo ụzọ ụgbọelu
Turkey Statistical Institute (TSI) ke akpa nkeji iri na ise nke 2020, dị ka data si Istanbul Strait bụ ugbu a 9 puku 734 ụgbọ mmiri. 6 n'ime ụgbọ mmiri ndị a bu onye na-anya ụgbọ mmiri kpọgara ha n'oge ntụgharị. Ogologo 448 mita [More ...]
Ümraniye Göztepe Metro na oflọ Ọrụ Istanbulites na 2022
Onye isi oche İBB bụ Ekrem İmamoğlu nyochara ọmụmụ ihe ndị dị na obodo mgbe oge a na-alọta. İmamoğlu mere nchoputa ebe a na-arụ metro na Ataşehir, ebe mmiri na-ere ere na Ümraniye na ebe a na-ere ekwo ekwo na Üsküdar. Kemgbe afọ 2017 [More ...]
Onu ogugu nke Coronavirus nke uwa abiala ihe ruru nde ato na 3 puku
Newdị coronavirus ọhụrụ ahụ na-apụta na Wuhan, mpaghara Hubey nke China, enyefeala ihe karịrị nde mmadụ atọ na 3 puku mmadụ n'ụwa niile, na-anwụ na-eru 370 puku. Na USA ebe ọrịa kacha emetụta [More ...]
55 Nde ekesa Context Koronavirüsl ụjọ Nkpuchi na Turkey
Onye isi nkwukọrịta Fahrettin Altun kwuru na ezigara nde nde 55 na ụlọ ọgwụ n'ụlọ ọrụ nke ịlụ ọgụ Coronavirus. Altun, na-elekọta mmadụ media akụkọ "coronavirus na Turkey" na a na nkwupụta site na aha, anọgide na-ewetara mba ọzọ nationals ka mba na nnukwu àjà [More ...]
Isetịpụ Corona maka Shoppingzụ ahịa M .. Ọ dịghị ihe ga-adị ka nke ochie
A na-arụ ọrụ ịmalitegharịa nnukwu ụlọ ahịa na-emechi n'ihi nje na-efe efe na-efe efe. N'ime ogo nke ihe ọmụmụ a, amụtara na ụfọdụ ndị mmadụ ga-emeghe ebe a na-ere ahịa ma nwee ngwaọrụ ịtụ ọfụma n'ọnụ ụzọ. Ọrịa Corana [More ...]
Ndị obodo Turkey akpọrọ aha ha na ọgwụ na ụwa
Ndị Turks bụ ndị na-eduzi sayensị nke ọgwụ ma dee aha ha na nkà mmụta ọgwụ n'ụwa. Dibia bekee na Göktürk, Biguta na Haruks na Aaron na Karluk so na ndi dibia na echefughi echefu kemgbe 728 AD. Isi okwu nke akwụkwọ ahụike, Imeju [More ...]
Amachibido mmachi oge ghọrọ ohere na Kayseri
Obodo Kayseri, site na ịmara ohere iji gbochie mbubreyo, na-achọ ịnwụ n'okporo ụzọ ụbọchị nkịtị. Onye isi obodo nke Obodo ukwu, onye gara leta ndị otu na-arụ ọrụ na Sivas Street. Mamdouh [More ...]
Arụ ọrụ S-400 Sigharịrị na-ebute n'ihi ntiwapụ
onyeisi oche Sözcüİbrahim Kalın kwuru okwu na kọmitii akpọrọ "ọdịnihu nke Idlib na ndị gbara ọsọ ndụ na Syria" nke ndị Washington DC nke Washington DC guzobere. Nkwupụta nkwuwa okwu ahụ, Patriot nke Erdogan na Trump ọtụtụ ugboro [More ...]
A ga-eji UAV mee ihe na nke mbụ n’afọ a maka ịchọpụta ihe ọkụ gbara n’ọhịa
Mịnịstrị nke ọrụ ubi na oke ohia, Director General nke Oke ohia (OGM) arụchaala ya iji lụsoo ọgụ ọkụ na oke ohia. Na mba anyị, ọkachasị oke ọhịa dị n'okirikiri ebido site na Hatay na ịgbago site na mpaghara Mediterenian na Aegean ruo Istanbul. [More ...]
Onye isi ala nke Onye isi nchekwa nke Onye isi ala. Dr. İsmail Demir bịanyere aka na nkwekọrịta n'etiti Avigbọelu Turkish na Industrylọ Ọrụ Space (TUSA Space) na HAVELSAN, nke na-ebu usoro mmepe na mmepụta maka National Combat Aircraft (MMU) [More ...]
Trade Minister Ruhsar Pekcan, a ọhụrụ ụdị coronavirus (Kovid-19) mkpa nke usoro nke digitalisation na-alụso ndị ọrịa na-ekwu na otu ugboro ọzọ na-egosi, "Digitalization na technology investments ka a mere na ubi, ọ dịghị ihe ọzọ Turkey na ụwa [More ...]
N'ime ọrụ ndị otu ndị otu Mịnịstrị na-ahụ maka ịzụ ahịa na ahia na İzmir rụrụ, a jidere puku naịra 1 nke ethyl mmanya dị ihe dị ka nde 15 TL, ebe arụ ọzọ rụrụ na Edirne Hamzabeyli Customs. [More ...]
Onye isi ala Soyer na-eleta ndị ọrụ Asphalt ma na-eme Ememe Ọrụ 1
Onye isi obodo obodo Izmir nke obodo Tunç Soyer gara leta ndị ọrụ tụbara asphlt na 23.00 n'abalị wee mee Mee 1, İşçi Bayram, ma jeere ha baklava. Otu ọ bụla na-enyocha usoro ịgbaziri ego enweghị ike mechie kpamkpam [More ...]
Taa na History: 2 May 1943 Zonguldak-Kozlu line
O nyere iwu ka ọ rụọ ofzọ Hegbọ elu Hejaz nke Abdülhamid II na Mee 2, 1900 na akụkọ ihe mere eme. Sultan Abdulhamid; "Maka owu nke Hatt-Mezkur, nke dabere na enyemaka nke Allah Pụrụ Ime Ihe Niile na enyemaka nke onye ozi anyị nke Allah (SAV)," [More ...]